गृहपृष्ठ » स्वास्थ्य » फ्याक्ट चेक : तातो पानीले नुहाउँदा कोरोना भाइरस मर्छ ? यस्तो छ विशेषज्ञको दावी !
अमर उजाला । विश्वभर कोरोना संक्रमण रोक्नको लागि विभिन्न किसिमका उपायहरू प्रयोग भइरहेको छ । कतिपयले दिनमा धेरै चोटि कषायः खान्छन् र कतिले तातो पानी पिउँदछन् ।
नेपालमा बेसार पानीले पनि खुबै बजार पायो । त्यो मात्रै होईन अम्बाको पातलाई पनि मान्छेहरुले बाँकी राखेनन् । यस बाहेक, यस्तै धेरै सल्लाह र तथ्यहरू सामाजिक सञ्जालमा पनि भाइरल हुने गरेका छन् । मान्छेहरु यसरी दावी गर्दैछन् कि उनीहरुले सिकाएको उपाय गर्दा मान्छेलाई बिल्कुल कोरोना संक्रमण हुन सक्दैन् ।
त्यस्तै एउटा दावी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । दावा अनुसार यदि तपाईंले दैनिक तातो पानीले नुहाउनुहुन्छ भने, कोरोना भाइरस मर्छ । यो उपचार कोरोना भाइरसलाई मार्न प्रभावकारी हुन सक्छ । के साँच्चै यो उपचार कोरोना संक्रमण रोक्नको लागि प्रभावकारी हुन सक्छ रु आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ ।
सामाजिक सञ्जालमा भनिएको छ कि तातो पानीले नुहाउँदा र तातो पानी बारम्बार पिउँदा कोभिड–१९ को संक्रमणको जोखिम कम गर्न सकिन्छ । यो भाइरल सुझावमा भनिएको छ कि कोरोना भाइरस तातो पानीको प्रभावका कारण मर्दछ, त्यसैले जब तपाईं घरबाट बाहिर निस्कनुहुन्छ तब तातो पानीले नुहाउनुहोस् ।
केन्द्रीय सरकारले यो भाइरल सल्लाहको बारेमा मानिसहरूलाई चेतावनी दिएको छ । भारतको केन्द्रीय सरकारको ट्वीटर ह्यान्डल ‘माई गभर्नमेन्ट इन्डिया’ को माध्यमबाट विज्ञहरूले औल्याए कि त्यस्ता उपायहरू कोरोना भाइरसलाई मार्न पर्याप्त छैनन् ।
उनीहरुका अनुसार न त कोरोना भाइरस तातो पानी पिएर वा त्यसबाट नुहाएर मारिन्छ न त यसले कोभिडको रोगलाई निको पार्न सक्छ । कोरोना भाइरसलाई नष्ट गर्नका लागि ६० देखि ७५ डिग्री तापमान चाहिन्छ ।
अमर उजालासँगको कुराकानीमा, दिल्ली एम्सका डा। आइशी पाल भन्छिन्, ‘मानिसहरूले हल्का मनतातो पानी पिउनु पर्छ । यो घाँटी सफा राख्न र पाचनका लागि लाभकारी मानिन्छ । मनतातो पानीको सेवन गर्नाले घाँटीमा भएको खकार हटाउन पनि मद्दत पुर्‍याउँछ ।’
एम्सकैं अर्का डा। राजीव रञ्जन भन्छन्, ‘कुनै पनि कुरा धेरै नै सेवन गर्नु हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन सक्छ । कषायःको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै हो, यो धेरै सेवन गर्नु हुँदैन। प्राकृतिक चिकित्सामा, यो विश्वास गरिन्छ कि औषधीहरू हाम्रो प्रतिरोध क्षमता बढाउन मद्दत गर्दछन्, यसलाई ध्यानमा राखी, कोरोनाबाट बच्न कषायःको उपभोगमा जोड दिइन्छ। एक दिनमा एक भन्दा बढी कपको कषायः उपभोग गर्नु हुँदैन।’
अन्त्यमा, अमर उजालाको स्वास्थ्य र फिटनेस श्रेणीमा प्रकाशित सबै लेखहरू डाक्टर, विशेषज्ञ र शैक्षिक संस्थासँगको अन्तरक्रियाको आधारमा तयार पारिएका हुन् ।
लेखमा उल्लेखित तथ्य र जानकारीहरू अमर उजालाका पेशेवर पत्रकारहरूले जाँच गरेका छन् । सबै लेखहरू यस लेखको तयारीको क्रममा पालना गरिएको छ। सम्बन्धित लेख पाठकको जानकारी र सचेतना बढाउनको लागि तयार गरिएको हो।
अमर उजालाले लेखमा दिएको जानकारी र जानकारीको लागि कुनै दायित्व लिने वा लिने जिम्मेवारी लिने छैन। माथिको लेखमा उल्लेख गरिएको सम्बन्धित रोगको बारेमा थप जानकारीको लागि आफ्नो डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस् ।